‘खनाललाई राष्ट्रपति, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र नेपाललाई अध्यक्षको बाँडफाँट गर्ने गरी नेकपा बिघटनको खेल’ « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, २२ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद चुलिंदै जाँदा पार्टी फुट्ने संकेतहरु बढ्दै गएको छ । हिजो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै पार्टी फ्ट्न सक्ने भन्दै मानसिकता बनाएर तयार रहन निकटस्थलाई भने । यसले नेकपाभित्र नयाँ तरंग ल्याएको छ ।
प्रचण्डको अभिव्यक्ति लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले विभिन्न पदको आकांक्षा र बाँडफाँटको योजनासहित नेकपा बिघटन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । उनले हिजो प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोजना गरेको भेटेघाटलाई ‘ग्याङ अफ फोर’ को पत्रकार भेटघाट भने । यसपछिको परिदृश्य विश्लेषण गर्दै फेसबुकमार्फत् देशीविदेशी षड्यन्त्र र चलखेल भएको भनेका छन् ।
धाेवीघाट गठबन्धनकाे परिणति
संसदीय दलकाे नेता – बाबुराम भट्टराई
संगठन विभाग प्रमुख – माेहन वैद्य “किरण”
पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलकाे नेताबाट पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”लाई अपदस्थ गर्न केन्द्रीय कमिटीमा हस्ताक्षर संकलन, बाबुराम, वैद्य, बादल, नारायणकाजी र बिप्लवकाे माेर्चाबन्दी ।
माअाेवादी धारकाे १ दर्जन समुहमा विभाजन र विघटन ।
अहिले १० बर्षपछि साउनकाे याे बेला
खुमलटार गठबन्धनकाे रिहर्सल
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा आेलीविरूद्द दाहाल, खनाल, नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको माेर्चाबन्दी ।
याे पद, प्रतिष्ठा, गुटबन्दी र भागबण्डा नभएर विधि, पद्दति र एकताकाे लडाई रे ? पार्टी विभाजनकाे खुल्लमखुला हाँक, हाेहल्ला र रिहर्सल ।
ग्याङ अफ फाेरकाे पत्रकार भेघाटपछिकाे परिदृश्य ???